IPOB na Buhari: Ihe na-eme na Japan | odumblog
IPOB na Buhari: Ihe na-eme na Japan
Ndi Indigeneous People of Biafra ekwuola na Onyeisi ala Muhammadu Buhari anọghị na Japan. Ha siri na ihe nkiri Femi Adesina wepụtara, nke gosiri na Buhari nọ na Yokohama bụ okwu ụgha.
Femi Adesina, Onye ndumọdụ Onyeisi ala Buhari, wepụtara ihe nkiri nke gosiri mgbe Buhari rutere Yokohama, Japan, na Mọnde. Lee ihe nkiri a ebe:
Mana ndi IPOB site n’ọnụ Emma Powerful, kwuru na ihe nkiri Adesina wepụtara bụ nke arụrụ arụ. O kwuru na ahụbeghi ‘Jubril-Buhari’ na Yokohama ma na Tokyo. O kwuru na ndi IPOB Intelligence Unit nọ na mpaghara dị iche iche na Japan, ebe a na-eche ‘Jubril-Buhari’.
O kwuru na ha kwu nchim na-eche ‘Jubril-Buhari’ n’ihi na nke a bụ ohere iji agba ihe ọjọọ n’anwụ.
N’otu aka ahụ, e wepụtakwara ihe nkiri nke na-egosi ndi isi obodo gara ya bụ emume na Japan. Ụfọdụ ndi isi obodo bịara emume a gunyere: Angela Merkel (Germany), Nana Akufo Addo (Ghana), Paul Kagame (Rwanda), Emmanuel Macron (France), Donald Trump (USA), dgz.
N’etiti ndi isi obodo ndi a, a hụrụ Akinwunmi Adeshina, onye isi African Development Bank nakwa Minista gara aga nke Agricultural and Rural Develpoment. A hụghị onyeisi ala Muhammadu Buhari na ya bụ ihe nkiri. Lee ihe nkiri a ebe:
Na mmeghachi ahụ, Reno Omokri kwuru na o nweghi uru Onyeisi ala Muhammadu Buhari bara nke mere na ahụghị n’ọgbakọ ahụ.
Onuorah Jennifer August 27, 2019
Bobrisky bụ ihe ihere nyere Naịjirịa: Runsewe
Onye a na-enyocha maka wayo intaneti akwadoghi ntuli m: Ihedịọha